Ubuntu Cinnamon Remix sele inayo iwebhusayithi. Inguqu engekhoyo ngo-Epreli | Ubunlog
Okwangoku nasemva kokuyeka u-Ubuntu GNOME, usapho lakwa-Ubuntu lunezinto ezisibhozo ezisemthethweni. Kwiminyaka yakutshanje bekukho ukungena kunye nokuphuma, njengokufika kwe-Ubuntu MATE kwi-8 kunye no-Ubuntu Budgie kwi-2015 kunye nesiphelo esichazwe ngaphambili seprojekthi ye-Ubuntu GNOME emva kokubuyela kwindawo eyaziwayo yemizobo yencasa ephambili ku-Ubuntu 2017. Ukuba akukho nto ingaqhelekanga yenzekayo, "kungekudala" siyakuba nencasa yesithoba, incasa yesinamon eyaziwa njenge projekthi namhlanje Ubin Cinnamon Remix.
Oko safumanisa kwaye sazisa Ukusuka koku kunokwenzeka, kubekho iindaba ezininzi ezibalulekileyo nge-Ubuntu Cinnamon. Eyokuqala yayisisithembiso sokuba kuyakubakho ukukhutshwa okuzinzileyo ngo-Epreli 2020. Emva kwexesha, inkokeli yeprojekthi isibonisa ezinye izikrini (apha) Kwaye wasinika iipakeji zokuvavanya umxholo wenkqubo oyilungiselelayo (apha). Kutshanje ukhuphe umfanekiso we-ISO esivumela ukuba sifumane umbono wokuba i-Ubuntu Cinnamon iyakuba njani, kodwa into ebalulekileyo ibisalahlekile esele ikho iiyure ezimbalwa.
Ngaba uyafuna ukuzama Ubuntu Cinnamon? Inguqulelo esivumela ukuba sibone ukuba basebenza phi ngoku iyafumaneka
Ubuntu Cinnamon Remix iya kukhupha ingxelo ezinzileyo ngo-Epreli
Zonke ezi zinto zingasentla zenzekile nge- iphepha lewebhu yima, oko kukuthi, singangena kuyo kodwa ibisakhiwa. Kwiiyure ezimbalwa, ukuba singena kweli phepha ubuntucinnamon.org siyabona ukuba iyasebenza. Iinkcukacha ezincinci nakwinto esiyiqondayo kwi-tweet epapashwe ngale ntsasa, iwebhu isekwe kwiWordPress:
Ngoku singathanda ukonwaba ukwazisa ukukhutshwa kwewebhusayithi yethu, https://t.co/6Sj9mWNwZr! Enkosi kubo bonke abavela @WordPress oko kwanceda. Ukuba unazo naziphi na iingcebiso nceda usazise.
-Ubuntu Cinnamon Remix (@UbuntuCinnamon) Novemba 7, 2019
Ngoku singathanda ukwazisa ngokusungulwa kwewebhusayithi yethu, http://ubuntucinnamon.org! Enkosi kuye wonke umntu ku @WordPress oncedileyo. Ukuba unayo nayiphi na ingcebiso, nceda usazise.
Nje ukuba ngaphakathi, into esiyibonayo liphepha lewebhu elifana nezinye iincasa ze-Ubuntu ezinje ngeLubuntu, Kubuntu okanye Xubuntu, kodwa isenokufumana ii-tweaks ngaphambi kokukhutshwa kwenguqulo yokuqala ezinzileyo. Njengoko beqhubela phambili, Olu hlobo luzinzileyo luya kufika ngo-epreli 2020, kodwa ayizukuba yinxalenye yosapho olusemthethweni okwangoku. Ukuba ufuna ukuzama Ubuntu Cinnamon, unokukhuphela umfanekiso wayo we-ISO ngomatshini oqinisekileyo kwinqaku elinxulumene noko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Cinnamon Remix sele inayo iwebhusayithi. Kuya kubakho ingxelo engekho mthethweni ngo-Epreli
Umxholo kunye nee icon ze-distro zijongeka njengeNumix
Asiyi "iwebhusayithi" kodwa "iwebhusayithi". Indawo yewebhu inamaphepha amaninzi.
I-Webmin, ukufakwa kwindawo yokugcina esemthethweni ku-Ubuntu 18.04
IFirefox ithatha amanyathelo okumisa ugaxekile wesaziso